Nhau - Nei vafare?
Ichi ndicho chigadzirwa chedu chitsva chine dhizaini dhizaini. Bhegi racho rakagadzirwa nemapurasitiki akawanda. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati layer (polyethylene) yakasununguka uye inopokana nekubvaruka.
Kana iwe uine chimwe chikumbiro, tinogona kuvandudza izvo zvinhu kuti zvive chipingaidzo chakakwirira kana chipingaidzo chechiedza. Iwo akajairwa maratidziro ari 5 L, 10 L, 18 L uye 20 L. Isu tinoda kupa vatengi mahara emahara.
Isu zvakare tine iyo muchina wekuzadza ye cheertainer bhegi mubhokisi. Kana iwe uchifarira, tinokutumira rumwe ruzivo.
Isu tinosanganisa zvakanakira zvakatipoteredza echinyakare bhegi-mune-bhokisi kurongedza uye mazhinji e
iwo mabhenefiti ekuita kweyakaomarara mudziyo.
Mudziyo wacho hauna kureruka uye uri nyore kubata.
Chigadzirwa chinodzivirirwa kubva pachiedza nemhepo, izvo zvinoitendera kuti ichengetedze zvese zvayo kusvikira yashandiswa zvakakwana.
Dhizaini yayo isina musono inobvumira 99% yemvura kudururwa.
Izvo zvinobuda zvinoyerera zvinowanzoitika uye zvinogara zvichingoitika, pasina mhepo yemhepo kana kupaza.
Bhegi rinoramba risinganyatso kufamba mukati mebhokisi, nokudaro richidzivirira chivharo kuti chisatama panguva yekutakura.
Kuderedzwa muhuwandu hwekupakata, zvese kana pasina uye kana pazere.
Kuchengetedza kwakakura muchadenga uye zvemari uye zvemamiriro ekunze.
Yakakura nzvimbo yenzvimbo yekutaurirana kwakajeka. Bhokisi iri tsika yakagadzirirwa. Sezvo zvaigadzirwa nemakadhibhokisi, mativi ese anogona kudhindwa, iyo inopa yakakura nzvimbo yekutaurirana pamusoro penzvimbo.
Technical rutsigiro uye yakagadzirirwa dhizaini.
Iyo ine hombe dzakasiyana siyana dzekumisa, kuvhara uye mavhavha.